ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ကိုယ်ဝမ်းနာ ကိုယ်သာသိ”
ကိုပေါရေးတာဖတ်ပြီး တိုက်ဆိုင်တာလေးတွေသွားသတိရမိတယ်။ ၈၈ မှာဆယ်တန်းအောင်ပြီး အကြာကြီး နားနေရတုန်းက လ၀ကရုံးမှာ နေ့ စားသဘောမျိုး လုပ်အားပေးခဲ့တုန်းကပါ။ ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးရင်မှတ်ပုံတင်ရှိမှ ပေးလို့ ရတာဆိုတော့ ရွာတွေမှာ မှတ်ပုံတင်မရှိသေးသူတွေကို အမြန်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြရတယ်။ အဲဒီတုန်းက ရွာတွေကို သွားရင် အ၀င်မခံကြဘူးလေ(ဟိုလူတွေမှတ်နေကြတာ)။ သူတို့ က တစ်ကျပ်တန်လေးပြပြပြီး ပြောတယ် “ကျုပ်တို့ ကတော့ သူ့ သမီးဖတ်ကပဲ၊ ဘာမှလာမပြောနေကြနဲ့ ”တဲ့။ မဆိုင်ဘူးဆိုတာမနည်းရှင်းပြခဲ့ကြတော့မှမှတ်ပုံတင်တော့လုပ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ အုပ်စုကိုရွာပြင်က ဇရပ်မှာပဲ အိပ်ခိုင်းတယ်ဗျ။ သူတို့ အကျိုးအတွက်လုပ်ပေးခဲ့ကြတာကို အခုတော့နားလည်သွားလောက်ပါပြီ။ ပွင့်ဖြူနားကပ်ရပ်ကမြို့ မှာပါ။
ကိုပေါရေးတာရော ယုဝရီရေးတာရော ဖတ်ရတာ စိတ်ထဲဝမ်းနည်းဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်။
ပြည်သူမပါ ဘယ်အရာ ဘာဆိုဘာမှမပြီးပါ တဲ့။
မှန်တယ်ကိုပေါ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအခရာဘဲ ဒုက်ခကိုခါးစီးကြမလားတော်လှန်ကြမလားရွှေးရမယ်
ကိုပေါရေ ကျေးဇူးပြုပြီး e-mail လိပ်စာလေး ပေးလို့ရမလား။ ကျမ ကိုပေါကို ဆက်သွယ်ချင်လို့ပါ။ ကိုပေါအမျိုးသမီး လိပ်စာဆိုလဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုပေါရဲ့ political post့ ပိုစ့်တွေဖတ်ခဲ့ပြီး သမျှတွေထဲမှာ ဒီပိုစ့်ကို ချွင်းချက်မရှိ သဘောအကျဆုံးပါပဲ။ အရင်ပိုစ့်တွေလဲကြိုက်ပါတယ်။
တယ်။ ကိုပေါရေ တခါတလေမှာ လူဆိုတာ တဘက်ကမှားနေသည်ရှိဦး အခြားတဖက်က ဖိဖိစီးစီး
နှိပ်ကွပ်ပြောဆိုတဲ့အခါ စိတ်အချဉ်ပေါက်တတ်တဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ တကယ့်ကိုကိုယ့်မိသားစု၊ ကိုယ့်ချစ်သူ ခင်သူတွေ၊ ကိုယ့်အကျိုးစီးပွါးတွေ နစ်နစ်နာနာမဖြစ်ခဲ့သေးဘူးဆိုရင်ပေါ့လေ၊
အင်း ကိုပေါပြောမှ အခုလောလောဆယ် ဖတ်လိုက်ရတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ သွားနေဖူးလို့ မြန်မာပြည်အကြောင်းသိသူပါဆိုပြီး ရေးလိုက်တဲ့ ဆောင်းပါးကြောင့် နအဖ၀မ်းသာအောင် လေလည်ပြလိုက်သလိုဖြစ်သွားလို့ ကာယကံရှင် စာရေးသူကိုယ်တိုင် စွေ့စွေ့ခုန်ဖြစ်နေရတဲ့ အဖြစ်လေး မျှဝေပါရစေ။ သူလဲ အခုတော့ မနိုင်ရာ ၀င်ထမ်းမိလို့ အတော်လေး သင်ခန်းစာရသွားပုံပဲ။ နအဖဘာသာပြန်ချက်ကလဲ ကမ်းကုန်အောင် တော်ပေသကိုး
Anonymous (July 26, 2009 4:30 AM ),
ကျွန်တော်အီးမေးလ်လိပ်စာက kopaw07@gmail.com ပါ။
ထောက်ခံပါတယ် ကိုပေါ- သို့သော်လည်း စိတ်စေတနာ စစ်မှန်တဲ့ တကယ်အရည်အချင်းပြည့်ဝ တဲ့ ပညာရှင်တွေ ကိုတော့..လုံးလုံး ဘုတောလို့ မရသေးဘူး ထင်တယ်။ တစု နဲ့တစု တလွှာနဲ့ တလွှာ နားလည် ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ကြရင်တော့..အကောင်းဆုံးပေါ့။ ကြုံလို့- ဖတ်ပီးသားလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။
( စိတ်ဝင်စားစရာ တခုပေါ့..သဘောတူလို့..နှစ်သက်လို့ရယ်တော့ မဟုတ်)း)
U may have seem the movie " Last Samurai ". Acting by Tom Cruise
Ending part of the movies I remember the word some one said, no matter where we are, we should not forget where we come from.
Its same as what your writing. Great post.
“ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အနောက်တိုင်းအယူအဆ၊ လူအခွင့်အရေးဆိုတာ အနောက်တိုင်းသားတွေရဲ့ တန်ဖိုး” စတဲ့ စကားတွေက အရှေ့တိုင်း ပညာတတ်အာဏာရှင်တွေက ထွင်လုံးထုတ်ထားတဲ့ စကားပါ။ ပြည်ကြီးတရုတ်တစ်ဦးက ဒီစကားမျိုး ပြောဖူးပါတယ်။ “ဒါဆို ကွန်မြူနစ်ဝါဒကရော အနောက်တိုင်းဝါဒ မဟုတ်လို့လား၊ ဘာကြောင့် ပြည်တွင်းဖြစ် ကွန်ဖြူရှပ်ဝါဒကို ဘေးချိတ်ထားရတာလဲ” ပြန်မေးခဲ့မိဖူးတယ်။ အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာလောက် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျတဲ့ ဘာသာတရားကို ကိုးကွယ်နေကြတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေကို ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အနောက်တိုင်းစနစ်, နားလည်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကိုတော့ လုံးဝ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ မြန်မာတွေ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မတန်သေးဘူးဆိုရင်…. မြန်မာတွေ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မတန်သေးဘူးလို့ အစော်ကားခံရသလိုပါပဲ။
နိုင်ငံခြားသား အတော်များများက မြန်မာအကြောင်း သေချာဂဃဏနမသိဆိုတာ လက်ခံပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ရေးတဲ့ မြန်မာအကြောင်း သတင်းတွေ၊ ဆောင်းပါတွေကို ဖတ်ရင် တစ်ခုခု ဟာနေသလို အားမလိုအားမရ ဖြစ်ရပါတယ်။ မြန်မာလိုရေးတဲ့, လွှင့်တဲ့ သတင်းတွေနဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့, လွှင့်တဲ့ သတင်းတွေမှာ ဘာကြောင့် focus လုပ်ပုံကွာဟနေသလဲဆိုတာ စဉ်းစား မိပါတယ်။ မြန်မာပြည်ထဲက မြန်မာတွေရဲ့ အမြင်တွေ (ဥပမာ ဦးဝင်းတင်ရဲ့ အင်တာဗျုးမျိုး) ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ရေးတဲ့ စာနယ်ဇင်းတွေမှာ ထည့်သင့်တယ် (ထည့်နိုင်အောင် ကြိုးစားသင့်တယ်) လို့ ထင်ပါတယ်။
ပျောက်နေတာ တော်တော်ကြာပြီး အခုမှ ပြန်ပေါ်လာတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သုံးသပ်တာ ကွာဟနေတာကိုတော့ ကျွန်မလည်း အမြဲ တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်မက အနောက်တိုင်းကို အသက်ကြီးမှ ရောက်ပေမယ့် ပညာရေးကို ကလေးအတန်းက ပြန်တက်တော့ အနောက်တိုင်းက လူတွေရဲ့ ရှုဒေါင့်ကို ကျွန်မနဲ့ အသက်ရွယ်တူတဲ့ တခြားမြန်မာတွေထက် ပိုမြင်လို့ ရပါတယ်။ သူတို့မှာ Flexible သိပ်များပါတယ်။ တခုမရရင် တခုကို ရွေးချယ်ဖို့ ပထမဦးစားပေး၊ ဒုတိယ ဦးစားပေးကနေ အစဉ်လိုက် Options တွေအများကြီးကို လျာထားပြီး အဖြစ်နိုင်ဆုံး တခုကို ရွေးချယ်တဲ့ စနစ်ကို သုံးပါတယ်။ ကျွန်မ ကျွန်မတို့ မြန်မလူမျိုးတွေလို ဘုရင့်နောင် ဖေါင်ဖျက်တာတို့၊ သေရင်မြေကြီး ရှင်ရင်ရွှေထီးဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုး သိပ်မတွေ့ရဘူး။ အဲဒါကပဲ ပြဿနာတခုကို သုံးသပ်တဲ့နေရာမှာ ကွာဟသွားတဲ့ အဓိကအချက် ဖြစ်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။
ကိုပေါရဲ့ အိုင်ဒီယာတွေထဲမှာ ဒီပို့စ်ကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ..
တကယ်မှန်ပါတယ်... ပြည်သူတွေ မသိဘူးဆိုတာက စာတွေမိုးပျံအောင် တတ်တဲ့သူတွေ သိတာထက် အများကြီးပိုပါတယ်.. လူသိထင်ရှားသိအောင် ပြောခွင့်မရလို့ပါ..
တကယ်တော့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ပညာအဆင့်အတန်းက အောက်တန်းမကျပါဘူး.. လုံလောက်တဲ့ အခွင့်အရေးသာ ရစမ်းပါစေ.သင်္ချာအတွက်အချက်မှာ တခြားနိုင်ငံသားတွေထက် အများကြီးသာပါတယ်.. အုပ်ချုပ်သူအသုံးမကျလို့ ...ပညာရေးအဆင့်အတန်း အောက်တန်းကျလို့သာ သူများအနှိမ်ခံနေရတာပါ.. ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေလိုသာ အခွင့်အရေးရကြည့်ပါ. အားလုံးထက်သာမှာပါ..
တစ်ခုလေးပဲ မြန်မာလူမျိုးတွေ ပြင်စရာလိုတာပါ.. အဲဒါက အချောင်လိုချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးနဲ့ သူများသာရင် မနာလိုတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးပါ... သာတဲ့ဖက် ကူးတတ်တဲ့ ယိမ်းယိုင်တတ်တဲ့ ယုံကြည်ချက်မခိုင်မြဲတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်လေးပြင်ဖို့ပဲ လိုနေတာပါ..
ဒီလို တန်ဘိုးရှိတဲ့ ပိုစ့် လေးဖတ်ရတာ အရသာလဲရှိ ၀မ်းလဲသာ သဗျာ။ မှန်တာတွေ များများ သာရေးပါ။